Mugovera, Kubvumbi 17, 2021
musha nyika dzakabatana WWE Superstars Triple H Childhood Indaba pamwe Untold Biography Facts
CB inopa Nyaya Yakazara yeWWE Nhoroondo nezita rekuti "Mutambo" & zita rizere "Paul Michael Levesque”Yedu katatu Triple H Nyaya Yenyaya Uye Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakajeka zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino. Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yemhuri, nhoroondo yeupenyu pamberi pemukurumbira, simuka kune mukurumbira nyaya, hupenyu hwehukama, hupenyu hwega, chokwadi chemhuri, mararamiro uye zvimwe zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezvake.
Hongu, munhu wose anoziva iye mumwe wezviso zvinonyanya kuzivikanwa mup wrestling. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Triple H's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Triple H Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Kutanga kubva, Triple H, (Akatendwa Paul Michael Levesque) akaberekwa musi we 27th waJuly 1969 kuNashua muNew Hampshire, United States. Akazvarwa kuna amai vake, Patricia Levesque uye kuna baba vake, Paul Levesque Sr.
Vatatu H vabereki Patricia naPaul.
Iyo nyika yeAmerica yemarudzi akachena neFrench-maCanada midzi inotama kubva mumhuri yakadzika midzi uye yakakurira mudhorobha rake (Nashua) kwaakakurira pamwe nehanzvadzi yake yakakura, Lynn.
Kukura muNashua, vechiduku Triple H havana kuomerwa sezvakaitwa nevarwi vakawanda muupenyu hwavo hwepakutanga. Akanga ari mwana akafara uyo akakurira semunhu anozvipira wrestling wrestling.
Triple H akakurira semwana anofara uye anofarira kuzvipira wewrestling.
Kwakatangira kufarira kwaTriple H mukurwira kwakatangira paakaona mutambo weterevhizheni waChief Jay Strongbow aine makore mashanu. Wrestling prodigy akada mutambo uye akatsigira zvaaifarira mairi nemakore.
Triple H Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Dzidzo neKubata Buildup
Nharaunda yedzidzo yaTriple H inosanganisira zvidzidzo zvake kuNashua South High Chikoro. Paaive pachikoro iye akatamba baseball uye basketball semitambo yehucheche. Triple H anga achiri kudzidza pachikoro apo paakasarudza kuve anovaka muviri.
Kazhinji Mufananidzo weTriple H muchikoro chesekondari.
Zvikonzero zvechisarudzo chakanga chisina kubvumirana nekuti wechidiki akanga aita pfungwa dzake kuti ave mutsigiri. Nokudaro, akatendeukira kuvakare kuti amubatsire kutarisa sevashandi vezvidzidzo vaakatarisa paTV.
Paakapedza chikoro chesekondari muna 1987, mudiki uye ane chinzvimbo Triple H akapinda mumakwikwi ekuvaka muviri uye akahwina iyo 'Mr. Teenage New Hampshire 'zita paakange akura 19, mugore 1988.
Triple H akakunda iyo 'Mr. Teenage New Hampshire 'zita rekuvaka muviri seane makore gumi nemapfumbamwe.
Shure kwaizvozvo, weanofarira kukwikwidza akatora basa kuGold's Gym muNashua kwaakasangana naTed Arcidi, aimbove mutsimba uye powerlifter. Arcidi akasvika pakuziva nezve Triple H chishuwo chekuita mutsimba uye akamuzivisa kune ane mukurumbira wrestler akatendeuka mudzidzisi, Walter 'Killer' Kowalski.
Triple H Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Basa Rokutanga Upenyu
Triple H akadzidziswa paWalter 'Killer' Kowalski yekudzidzira chikoro muMalden, Massachusetts kutanga kwa1992 uye akaita dambarefu rake rekusimudzira Kowalski - iyo International Wrestling Federation (IWF) - munaKurume 24th 1992 achishandisa zita rezita Terra Ryzing.
Katatu H akarwa pasi pezita rezita rekuti "Terra Ryzing" mumazuva ekutanga ebasa rake.
Maitiro ake okutanga pakusimudzirwa anosanganisira kukunda mumwe Mad Dog Richard kuti akunde IWF Heavyweight Championship. Shure kwaizvozvo, Triple H yakarwisana nokuda kwekutsvaga kwakasiyana-siyana paEast Coast yakasununguka yedunhu uye yakatanga kuva negore rimwe chete neWorld Championship Wrestling (WCW).
Triple H Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Mugwagwa Mukurumbira Nhau
Achienderera mberi, Triple H akatora padanho padhuze nembiri nekusainirwa kuWWE (yainzi World Wrestling Federation WWF) mu1995. Akatora zita remudariro "Hunter Hearst Helmsley" ndokuenderera mberi kuhwina Intercontinental Championship nekukunda Marc Mero musi waOctober 21, 1996.
Kwakazotevera kuita mutsimba akaona Triple H ichipfupisa zita rake remuchadenga - 'Hunter Hearst Helmsley - kuenda ku "Triple H", akaumba D-Generation X yakagadzikana naChyna, Rick Rud naShawn Michaels muna 1997, uyezve kuhwina mukombe weEuropean Championship mu1998.
Triple H yakatora nhanho padhuze nemukurumbira nekuhwina iyo European Championship Title muna 1998.
Kunyange zvazvo Triple H akanga akanaka pakutsvaga mitezo, akawana zvakaoma kuchengetedza kutonga kwenguva refu, dambudziko rakamuona achirasikirwa nemazita mwedzi mishomanana mushure mokuvabata. Kuwedzera kune dambudziko kwaiva kukuvadzwa kwakapfuura kwakamuita kwemwedzi.
Triple H Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Kumuka Mukurumbira Nhau
1999 kusvika 2002 aive makore akaunza uye akachengeta maTriple H's mune kuonekera. Akatanga nekupinda mugakava naVince McMahon waakakunda paAmagedhoni uye akawana zita remadunhurirwa rekuti 'The Game' uye 'The Cerebral Assassin' muna 2000.
Pamusoro pebasa rake mukati mekunge Triple H yakakunda WWF Tag Team Championship kokutanga ne Stone Cold naMnu McMahon. Akazadzisa sarudzo yake yakatevera yekubudirira kukuru kuburikidza nekukunda 2002 Royal Rumble uye kukunda Chris Jericho kuti akunde musoro Wusingazivikanwi WWF Championship.
Triple H inokunda iyo WWF Isingazivikanwe Makwikwi muna 2002.
Triple H Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Relationship Life Facts
Triple H murume akaroorwa sepanguva yekunyora. Tinounza mashoko pamusoro penyaya yake yekuroorana, kukundikana kwewanano uye hukama hwehukama huripo. Wrestler akatanga nekutambidzana naJoanie Laurer, anonyatsozivikanwa seCyna mu1996. Vaya vekare vaimhanya vakagara pamwe chete kwemakore 6 vasati vauya neukama hwavo kusvika pakuguma. Chyna akanga asingadi kuva nevana panguva iyo saka hapana mwanakomana kana mwanasikana (s) akaberekwa neukama hwavo.
Triple H uye Chyna yemusi wa1996-2002.
Yakazotevera nyaya yake naStephanie McMahon, mwanasikana waVince McMahon, CEO weWWE. Vakaroorana vakaratidzirana muchibvumirano pakati pekutanga kwe2000 uye vakaramba vachiroora musi we 25th waOctober 2003.
Mufananidzo weTatu H Kuroora kuna Stephanie.
Imba yavo inokomborerwa nevanasikana vatatu vanosanganisira Aurora Rose (akaberekwa muna July 24th 2006), Murphy Claire (akaberekwa muna July 28, 2008) uye Vaughn Evelyn (akaberekwa August 24th 2010).
Triple H Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Upenyu hweMhuri Zvechokwadi
Triple H akaberekerwa mumhuri yepamusoro yeC4. Tinokuudza mashoko echokwadi nezvemhuri yemhuri yake.
Nezve Baba vaTatu H: Paul Levesque Sr ndibaba vaTatu vaH. Ivo baba vane rudo uye vanotsigira vane chizvarwa cheFrance. Akave akatsigira kwazvo basa raTriple H nematanho pakati pevamwe vateveri vewrestler.
Nezve Amai vaTatu H: Patricia Levesque ndiamai vaTriple H. Amai vane rudo vane mavambo eCanadia ndemumwe wevanhu vepedyo kumoyo waTriple H uye anotsigira zvaanoedza kuita.
Triple H Nevabereki Patricia naPaul.
Nezve Triple H's Siblings: Triple H haina hama asi hanzvadzi inozivikanwa seLynn. Chinyanyozivikanwa pamusoro peLynn kunze kwekuti yakakurira neTatu H uye inosangana nehukama hwepedyo naye kusvikira zuva.
Triple H NaHanzvadzi Lynn.
Nezve hama dzaTatu H: Kure kubva kumhuri yepedyo yaTriple H, vanasekuru vake baba Leo Levesque naClaire Desjardins nepo zvishoma zvichizivikanwa nezve sekuru vake nasekuru naambuya. Zvichakadaro, maiguru nababamunini vake havasati vaonekwa pamwe chete naye, Izvozvowo zvinoyambuka bhodhi revazukuru nababamunini vehama dzake.
Triple H Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Personal Life Facts
Chii chinoita katatu H tick? gara shure apo isu tichikuunzira maitiro ehupenyu hwake kuti akubatsire kuwana mufananidzo wakazara wake. Kutanga, Triple H inotarisa ndeye mutsara we Leo Zodiac unhu hweunhu.
Iye ndiye anoronga nesimba uye mutungamiri uyo anonyanya kutsvaka kuda kwake. Zvido zvake zvinopedza nguva nemhuri yake uye kushandisa. Triple H inofarirawo muAmerican football, baseball uye basketball.
Kutamba uye Kuona mitambo yebhasiketi ndeimwe yeTriple's H inofarira.
Triple H Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Lifestyle Facts
Kunyangwe Triple H ine mari inofungidzirwa kuti inosvika madhora makumi matatu nemashanu emamiriyoni iye haasi iye wekurarama hupenyu hwekushamisira. Iyo yekugara yewrestler muWeston, Connecticut (CT) ingangove yakavanda kubva munzvimbo dzine mhirizhonga.
Kunyange zvakadaro, ane motokari dzinotaura zvakanaka nezvebasa raakabatanidzwa muWWE. Iyo motokari inosanganisira Mercedes Benz SL-Class, Cadillac Escalade uye BMW M760 LI sport.
Triple H anorarama semunhu akapfuma akanyarara.
Triple H Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Untold Facts
Triple H imwechete pakati pemaminiti eminhamba yevrestlers vasina mazamu kana hutano hwemagariro sekunguva yekunyora.
Triple H ndeimwe yevashoma varwi vasina maTattoos.
Iye ndiye bongo shure kwekamuri yekudzinga pamwe chete nemuvambi weNXT uye nhengo dzakawanda dzepurogiramu. Iyewo ndiye Mutevedzeri Mutevedzeri weMutungamiri weTalent, Live Events uye Creative for WWE sezvazvakaitika munguva yekunyora.
Triple H yakaita mafirimu akawanda anosanganisira The Chaperone (2011), Relative Strangers (2006) uye Blade: Utatu (2004).
Triple H inoshanda muThe Chaperone (2011).
Nezvechitendero chake, Triple H akaberekwa uye akarererwa semuKristu. Kunyange zvazvo achitenda muna Mwari, Triple H haasiwo zvechitendero uye anoda kuchengetedza nyaya dzekutenda kwake pachake.
Triple H Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Video Summary
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Triple H Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At childhood biography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!